सत्ता लोभले अशान्त बनेको स्वर्गमा चुनाव मात्रै एउटा दीर्घकालीन समाधान हो भन्ने ठहर भइसकेको थियो । त्यही बेलादेखि देवताहरू आन्दोलन त्यागेर आ–आफ्नो पार्टीको चुनावी रणनीतितिर केन्द्रित थिए । धरतीमा हुने चुनावहरूबाट अनुभव बटुलीसकेका देवताहरू आफ्नो विजयको लागि राम्रा–राम्रा नाराहरू लिएर चुनावी युद्धमा आउने जमर्को गर्दै थिए । चुनावमा हुन सक्ने भाँडभैलोलाई नकार्न सकिँदैन थियो । तसर्थ, सबैको मिलोमतोमा चुनावी पर्यवेक्षकहरूलाई बोलाइएको थियो । यी पर्यवेक्षयकहरू प्रायः सबै धरतीलोकबाट चुनिएका थिए ।
धरतीमा प्रजालाई न्याय दिन शासक वर्गबाट प्रजातन्त्रको स्थापना र त्यसको अभ्यास भएसरह स्वर्गमा पनि देवताहरूको हकहित जगेर्ना गर्न सुरु हुन लागेको ‘देवतन्त्र’ अनि त्यसको आवश्यक कार्यान्वयनका लागि ब्रह्माण्डको सबै लोकबाट शुभकामना सन्देश आइरहेका थिए । स्वर्गमा देवतन्त्रको स्थापना भएको र त्यसबाट हुने परिवर्तनको अनुभव समेट्न पाताललोकबाट असुरहरू र धरतीलोकबाट सर्वसाधारण जनता स्वर्गलोक पुगिसकेका थिए । आसन्न चुनाव ऐतिहासिक हुने कुरामा दुई मत थिएन, कसैको पनि ।
पाताललोकका असुरहरूबीच पनि प्रजातन्त्र र देवतन्त्रको असर परिरहेको देखिन्थ्यो । उनीहरू असुरतन्त्रको योजना बनाइरहेका थिए ।
धरतीलोकको पाशुपत क्षेत्र नगरीबाट गएका चुनावी पर्यवेक्षकरूमध्ये नै एक व्यक्ति चुनाव आयुक्त भएका थिए । निष्पक्ष चुनाव गराउनुपर्ने दायित्व बोकेका यी मनुष्यले देवताहरूलाई आफ्नो पार्टी र पार्टीको चुनाव चिह्न एक हप्ताभित्र दर्ता गराइसक्नुपर्ने प्रावधान राखेका थिए । त्यसपश्चात चुनावी गतिविधिले तीव्र रूप लिन सुरु भएको थियो ।
उता, अहिलेसम्मका देवराज इन्द्र सत्ता गुम्न सक्ने आशंकामा छटपटाउन लागेका थिए । देवताहरू फुटेर अलग–अलग पार्टीतिर लाग्दा उनको आफ्नै पार्टीको शक्ति कमजोर बनेको थियो । उनलाई बहुमत लेराएर आफ्नो कुर्सी जोगाउन निकै धौ–धौ पर्ने देखिन्थ्यो । सत्ता जोगाउन इन्द्र कुनै पनि कदम उठाउन तयार भएको कुरा सर्वत्र व्याप्त भइसकेको थियो । त्यसैले होला, चुनावको निर्णय हुनुअघिको आन्दोलनलाई नेतृत्व दिएका कुबेर अलि चनाखो रूपमा इन्द्रको गतिविधि नियालीरहेका थिए ।
आफ्नो अपार धन, कामदेवको सौन्दर्य अनि वासना शक्तिले अप्सराहरूलाई आफ्नो पार्टीमा पार्न सफल कुबेर इन्द्रको छटपटीमा अति प्रशन्न देखिन्थे । स्वर्गको कुर्सी आफ्नो झैँ लाग्न थालिसकेको थियो, कुबेरलाई । उनी अक्सर चुनावी नतिजा फेरबदल गर्न र आवश्यक परे चुनावी बुथ कब्जा गर्न असुरहरूलाई जिम्मा दिनुपर्ने राय व्यक्त गर्थे, चुनावी बैठकमा आफ्ना सहपाठीहरूसँग । यसका लागि लाग्ने खर्चको उनलाई कुनै पर्बाह थिएन ।
कुबेरले आफ्नो सम्पत्तिको भरपुर प्रयोग गरेर स्वर्गको कुर्सी हत्याउने प्रयास गरिरहेको कुरा महर्षि नारदले सुइँको पाएर विष्णुलाइ सुनाए । त्यसपश्चात विष्णुले धनधान्यकी देवी आफ्नी अर्धांगिनी लक्ष्मीलाई भनेका थिए, “हे प्रिये, कुबेरबाट चुनावी आचारसंहिताको पालना नहोलाजस्तो बुझिन्छ । त्यसैले तिमीले उसलाई धन दिन बन्द गरिदिनू । जसले गर्दा उसको सम्पत्ति क्षीण बन्दै जान्छ र उसको गलत नियत पूर्ण हुन पाउँदैन ।”
त्यसैबखत उनले नारदलाइ पनि भनेका थिए, “नारद, तिमीले सबैतिरको चुनावी माहोल बुझेर आऊ । हामीले त्यहीअनुरूप चुनावी रणनीति तयार गर्नुपर्छ ।” आज्ञा शिरोपर गर्दै नारद पुगेका थिए, ब्रह्मलोक सबैभन्दा पहिले ।
ब्रह्मलोक सुुनसान थियो । वृद्ध भइसकेका ब्रह्मालाई सहयोग गर्न कोही आएका थिएनन् । उनी एक्लै आफ्नै तालमा बड्बडाइरहेका थिए, “मैले यत्रो संसार सृष्टि गरेँ । तर, आज मलाई मेरो चुनावी यात्रामा सहयोग गर्ने कोही छैनन् ! आफूले बनाएको संसार आफूले नै नष्ट गरिदिऊँजस्तो लागिसक्यो ।”
नारदले ब्रह्माको अवस्था देखेर सोचे, ‘वृद्ध भइसकेका यिनले कसरी स्वर्गको कुसी सम्हाल्न सक्छन् र ? केही गरी जितिहाले भने पनि कुर्सीमा बसेको भोलिपल्टदेखि नै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न दबाब हुन्छ, सबैलाई । बरु, पार्टी राजनीति त्यागेर सन्न्यासी भई सरस्वतीको वीणामा भुल्दा नै बेस होला बूढालाई !’ यस्तै सोच्दा सोच्दै उनी हिमालयतिर पुगी सकेछन् ।
हिमालयको अवस्था मनोरञ्जनात्मक थियो । पार्टी नेता को बन्ने हानथाप चलिरहेको रहेछ । गणेश र कुमारको झगडाले अशान्त बनिसकेको रहेछ, कैलाश । नन्दी–भृंगीहरूको ठूलो जमात भएको कैलाशमा भोलेबाबा पनि मूकदर्शक भएर बसिरहेको थिए । नयाँ पुस्तालाई शासन भार दिँदा व्यवस्था सुुदृढ हुन्छ भन्ने महादेवको विश्वास त्यतिखेर एउटा प्रश्न बनेर खडा भइरहेको थियो । उनी स्वयं चुनावमा आउन सक्थे । तर, उनले गणेश वा कुमारको रूपमा नयाँ पुस्ता देखे ।
तथापि, सोच्दै नसोचेको कुरा भइरहेको थियो । नयाँ सोच लिएर आउनुपर्ने नयाँ पुस्ताले पुरानै कुराको अनुशरण गरिरहेको थियो, आफू–आफूमा झगडा गरेर । यस्तो लाग्थ्यो, कैलाशबाट अब दुइटा पार्टी बन्नेछ । एउटा गणेशको नेतृत्वमा अनि अर्को कुमारको नेतृत्वमा । एउटै पार्टीभित्र नेतृत्व वर्गको आपसी असमझदारीले गर्दा वा भनौँ, कुर्सी लोभले गर्दा ठूलो हुन सक्ने पार्टी अनि लामो समय सत्तामा रहन सक्ने पार्टी त्यतिखेर ‘फुट’को नजिक पुगेको भान भयो, नारदलाई । दिक्क मान्दै उनी अन्तर्ध्यान भए, त्यहाँबाट ।
हेर्दा–हेर्दै पार्टी र पार्टीको चुनाव चिह्न दर्ता गर्ने दिन आयो । पाशुपत क्षेत्र नगरीबाट चुनाव गराउन स्वर्ग पुगेका चुनाव आयुक्त त्यो बेला आफूलाई निकै शक्तिशाली अनुभव गर्दै थिए । उनका वरिपरि विभिन्न नाराबाजीसहित थुप्रै देवता अनि उनका देवगणहरू उपस्थित थिए । त्यहाँ भइरहेको जथाभावी नाराबाजी अनि छरपष्टिएको भिडलाई व्यवस्थित गर्न अप्सराहरू प्रयोग भएका थिए ।
केही समयपछि भिडको सन्तुलन कायम भएको देखेर आयुक्त आफ्नो आशनबाट उठे र सम्बोधन गर्न लागे, “हे देवता ! स्वर्गको गरिमालाई महत्त्व दिँदै केही बेर शान्त भइदिनुहोला । चुनावका लागि तपाईंहरूले विधिवत् पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य पार्टीको आपत्ति नभएको खण्डमा पार्टी अनि त्यसको चुनाव चिह्नलाई मान्यता दिइनेछ । एक पार्टीमा एक नेता रहने प्रावधान छ । तपाईंहरूले पार्टी नेतालाई सभापति भन्नुस् वा अध्यक्ष भन्नुस्, त्यो नितान्त तपाईंको पार्टीको विधानभित्रको कुरा हो । निर्वाचन आयुक्तको हिसाबले मेरो कर्तव्य निष्पक्ष चुनाव गराउनु हो । त्यसका लागि यहाँ सबै लोकबाट चुनाव पर्यवेक्षकहरूको भेला भइसकेको छ । चुनावका लागि आवश्यक नियम पालना गर्नु तपाईंहरू सबैको दायित्व हो । चुनाव सफल होस् । यही मेरो शुभकामना । अब पालैपालो आफ्नो पार्टीको नाम अनि चुनाव चिह्न लिएर पार्टी नेता अगाडि आउनुहोस् । म दर्ता कार्य आरम्भ गर्छु ।”
सर्वप्रथम ब्रह्मा आए । ब्रह्मलोकबाट ‘ब्रम्हा’ पार्टी र चुनाव चिह्न कमलको फूल दर्ता गर्न प्रस्ताव भयो । तर, त्यहाँ विष्णुले आपत्ति जनाए । चुनाव चिह्न कमल राख्न नपाइने उनको अडान थियो । एउटा सामान्य चुनाव चिह्नको लागि झगडा गर्न नहुने आयुक्तको आग्रहलाई मानेनन्, विष्णुले । विवश बूढा ब्रम्ह्माले कमल त्यागेर आफ्नो चुनाव चिह्न वीणालाई रोजे ।
विष्णुले आफ्नो पार्टीको नाम ‘नारायण’ राखे र पार्टी चिह्न शेषनाग रोजे । विनागतिरोध उनको पार्टी र चिह्न दुवै दर्ता भयो ।
अब पालो थियो, हिमालयबाट आएको कुमार समूहको । उनीहरूको पार्टीको नाम ‘क हिमालय’ थियो भने चुनाव चिह्न मयूर भयो । त्यसपछि ‘ग हिमालय’ पार्टी लिएर गणेश आइपुगे, चुनाव चिह्न मुसा रोज्दै ।
इन्द्रले आफ्नो पार्टीको नाम ‘अमरावती’ राख्ने घोषणा गरे । उनको चुनाव चिह्न बज्र बन्यो ।
उता, आन्दोलनकारीको श्रेय पाएको कुबेरको गुटले आफ्नो पार्टीको नाम ‘नयाँ स्वर्ग’ राख्यो र सुनको सिक्कालाई चुनाव चिह्न बनायो ।
अरू सबैले एकपछि अर्को गर्दै आ–आफ्नो पार्टी दर्ता गराए । स्वर्गमा देवताहरूको ‘देवतन्त्र’ले पहिलो खुड्किलो चढ्यो । सबै खुसी देखिन्थे । आयुक्त सँगसँगै सबैले जोडदार नारा लगाए, ‘देवतन्त्र जिन्दाबाद’ ।
चुनावको मिति तय भयो । सबै पार्टीहरू चुनाव–प्रचारमा लाग्न थाले । पर्यवेक्षकमाझ एउटै कुरा सुनियो, ‘कसैको पनि बहुमत नआउने भयो ।’
अन्ततः चुनावको दिन पनि आयो ।
पर्यवेक्षकहरूको रोहबरमा चुनाव सम्पन्न भयो । सबै देवताहरूले ‘देवतन्त्र’को अभ्यास शुभारम्भ गरे । शान्त वातावरणमा चुनाव सकिएसँगै मतगणना सुरु भयो ।
पार्टीहरू र पर्यवेक्षकहरूको अनुमानभन्दा निकै फरक नतिजा सार्वजनिक भयो । ‘अमरावती’ पार्टीलाई विजेता घोषित गरियो । इन्द्र पुनः कुर्सीमा पुगे ।
अन्तर्घात भयो भन्ने क्रोध देखियो कतै । कतै सत्ताको शक्तिमा चुनावमा धाँधली गरेर जितेको आवाज चर्किन थाल्यो । पदलोलुपताले आफ्नो गरिमा गुमाएको भन्न थाले, इन्द्रलाई । सँगै कतिले उनलाई भ्रष्टाचारीको संज्ञा पनि दिए ।
जे होस्, ‘देवतन्त्र’को प्रतिफल सबैले स्वीकार्नै पथ्र्यो । त्यसैले इन्द्रको पुनर्बहालीमा भित्र–भित्रै रुष्ट भए पनि उनलाई स्वर्गको कुर्सीमा फेरि बस्न कसैले रोक्न सकेन ।
विराटनगर । विराटनगरका कथाकार शंकर खरेलको पछिल्लो कथासंग्रह ‘टिलो’ भारतको सिक्किममा विमोचन गरिएको छ । सिक्किम राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले... ३ घण्टा पहिले